Qalabka Foray ee Foley
Nidaamka Qalliinka Qulqulka Qulqulka 'Burette IV Wing Spike' oo leh Dareer Luer Lock Oo Lagu Tuuri Karo Faleebo Carruurta
1 Faleebo lagu diyaariyey Stopcock Saddex-gees ah
2-4 faleebo la dhigay
Burette ayaa la dhigay
Shiinaha Factory Price la tuuro Anti-taraarax caaga & Non-xidhka daabaca Fabric socon kabaha Cover
Daboolka kabaha ayaa ah dhar siib ah oo la tuuri karo oo si fiican ugu habboon qaababka kabaha iyo cabirka kala duwan.
Waxay ka hortagaan waxyaabaha khatarta u leh (oo ay ku jiraan walxaha dabiici ah iyo kiimikada) inay taabtaan salka kabaha qofka.
50ml-200ml Cirbadda Biyo-la-Tuuri Karo oo Talo Bixin Kateetar leh Ce ISO
Cirbadaha Waraabka waxaa loo isticmaalaa Waraabinta Nabarada, Dhagaha, Kateetarka indhaha iyo quudinta indhaha. Cirbadaha Irrigating nabarro ayaa bixiya fuuq bax, baabi'iya qashinka, oo nadiifiya.
Waxqabadyo Badan Oo Qalliin Caafimaad Ah Oo Quudinta Quudinta Ah
Mashiinka quudinta gudaha waa qalab caafimaad oo elektiroonig ah oo xakameeya waqtiga iyo qadarka nafaqada ee loo dhiibo bukaan socodka inta lagu jiro quudinta jirka. Quudinta xubinta taranka waa nidaam uu dhakhtarku ku rido tuubo marinka dheef-shiidka bukaanka si loogu gudbiyo nafaqooyinka dareeraha ah iyo daawooyinka jirka.
La tuuri karo 3 Midab Buluug Midabkiisu wajiga yahay oo aan Xidhnayn Maaskaro Waji
Cudurka faafa ee COVID-19, dawladuhu waxay ku talinayaan isticmaalka waji-shareerka iyadoo ujeeddo guud laga leeyahay guud ahaan dadweynaha: si looga fogaado in u ku faafo dadka qaba cudurka dadka kale.
Bouffant Nonwoven PP Cap Shower Maydhashada Hotel Cap Wareegtada Madaxa Madaxa Timaha Kalkaaliyaha Kalkaaliyaha Dhaqtarka Caafimaadka Qalliinka
QAADO BUFFANT waxaa laga sameeyaa maaddada aan linenka ahayn, oo aan tolmo wanaagsaneyn 100% polypropylene-ka miiqan, xirmooyinkaan miisaanka yar leh, ee neefsanaya waxay wataan xarigyo jilicsan oo aan la soo bandhigin si ay u helaan taam iyo raaxo aamin ah.
Bixinta CATIII Customed Nooca 4/5/6 Microporous Guud ahaan.
nooca aan-tolmo wanaagsan leh ee 4/5/6 la duubay guud ahaan wuxuu ka kooban yahay cufnaan sare oo SMS ah ama Microporous Film Laminated qalabka, wuxuu si wax ku ool ah uga hortagi karaa waxyeellada ka timaada rinjiga ku buufin iyo buufinta kiimikada, iwm.
Sidoo kale dharkeedu wuxuu leeyahay astaamo neefsasho leh oo raaxo leh, sheygan ayaa aad ugu habboon in loogu isticmaalo isbitaalada, saliida saliidda, shaybaarka, iwm.
Medical Oem Gurmadka Maro adag ee Ortopediga Cagta Lugta
Kabaygu wuxuu ka kooban yahay lakabyo kala jaad ah oo cajaladaha lagu rido lafaha ah iyo dhar gaar ah oo aan tolmo wanaagsan lahayn. Waxaa lagu gartaa u nuglaansho wanaagsan, waqti qallajin degdeg ah, qalafsanaan sare ka dib dhimashadda iyo miisaanka fudud.
Faashadda Dadweynaha / Nuuradda Baaskiilka Paris
Waxyaabaha: Cud ama polyester
Tayada: Wax tayo sare leh
Codsiga: Caafimaadka, isbitaalka, baar
Xirxirida: Sida ku xusan baahida macaamiisha
Isbitaalka Adeegsada Cajalad Ceyrta Caafimaad ee Cadeysan ee Midabkeedu Yahay Midab Caddaan
Ku habboon in loo isticmaalo isbitaalka iyo rugaha caafimaadka
Dhalo-dhalaal ama acrylic koollo dahaarka leh
Latex-Free iyo hypoallergenic Waxay ku habboon tahay maqaarka xasaasiga ah
Si fudud loo jeexjeexo
Aad u neefsan kara oo dabacsan
Qiimaha Tooska ah ee Warshadda Tayada Caafimaadka Tayada Suufka Suufka
Faashadda Vaseline waa alaab nadiif ah.
Isticmaalka la isticmaali karo, nadiif ah, ammaan ah oo nadiif ah
3.Waxay sameysay faashad iyo faasas.
Gargaarka Koowaad Koofiyadaha Faashadda Maqaarka Midabka Koolada Faashadda Faashadda Dhaawaca Balaastarka Gargaarka Koowaad
Woundplaset waa nooc ka mid ah daroogada qalliinka ee inta badan loo isticmaalo nolosha dadka.Aid, oo sidoo kale loo yaqaan "hesteratic plaster", oo leh dhiig bax, nabar ilaalinaysa saameynta.